Thursday January 23, 2020 - 12:30:50 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamada Melleteriga Kenya ayaa markale lakulmay fadeexad ku aaddan fulaynimadooda marka ay dagaal lagelayaan dagaalyahanada Shabaabul Mujaahidiin.
Wargeyska NewYork Times ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa soo daabacay warbixin dheer oo uu kaga hadlayo weerarkii halyeeynimo ee horraantii bishan ay Xarakada Al-Shabaab ku qaadday saldhigga ciidamada Mareykanka ee Kenya, kaas oo lagu dilay laguna dhaawacay 17 askari oo Aemrican ah iyo sagaal askari oo Kenyaati ah.
Wargeyska ayaa sheegay in askarta Mareykanka lagu kadiyay weerarka iyagoo khabar moog ah islamarkaana ay muddo ku qaadatay in ay isdifaacaan, ciidamadii Kenyaatiga ee qaabilsanaa difaaca saldhiggana ay naftu badday in ay ku dhuuntaan howdka iyo cowska ku yaalla hareeraha saldhigga, halka qaar kamid ah ciidamadii iyo shaqaalihii Americanka ahaa ee joogay saldhigana iyagoo madaxa isgashtay ay isugu tageen teendhooyinka ku yaalla banaanka xerada, halkaas oo ay iska cabin naf la caarinimo ah kasoo sameynayeen, iyagoo sugaya inuu mar uun dagaalku soo dhammaado oo ay gurmad helaan.
Wargeyska New York Times ayaa sheegay in weerarkii xerada Maanda Bay uu walwal xooggan ku abuuray wasaaradda Gaashaandhigga ee Pentagonka, kuwaas oo durbaba ku dhawaad 100 askari oo gurmad ah soo diray si ay u xoojiyaan saldhigga.
Sida lagu sheegay warbixinta Pentagonka ayaa sidoo kale taliskooda dalka Jarmalka kasoo daabulay cutubyo katirsan ciidamada Mareykanka ee loo yaqaano Green Berets islamarkaana keenay dalka Jabuuti sababo ku aadan cabsi ay ka qabeen in gabi ahaanba cagta la mariyo ciidamadii iyo shaqaalihii Mareykanka ee ku sugnaa saldhigga.
New York Times oo isdul taag kooban ku sameysay weerarka iyo qaabkii uu ku dhacay ayaa sheegtay in ay soo wareystay saraakiil military oo katirsan wasaarada gaashaandhiga iyo qaar kamid ahaa shakhsiyaatkii sida gaarka ah ula socday weerarka iyagoo tilmaamay inay saraakiisha qaarkood diideen magacyadooda sababo aadan amnigooda.